Salah Abdislam: Shan waxyaalood oo ku saabsan weerarrada Paris oon lagu tuhunsan yahay | Raadgoob
Salah Abdislam: Shan waxyaalood oo ku saabsan weerarrada Paris oon lagu tuhunsan yahay
Shan qof oo ka badbaaday intii uu socday weerarkii 13-kii November ee sannadkii 2015-kii, kaas oo dilay 130 qof oo Paris ku yaala ayaa maxkamad ku taala Belgium ku qaadatay isqarxin taasoo keentay inuu qabsado afar bilood ka dib Brussels.
Salah Abdislam, oo dambi culus ah oo ka soo jeeda Brussels, oo la soo gabagabeeyay xiriirka jihaadiyiinta, ayaa maalin walba la dhisi doonaa xabsiga Faransiiska iyo caasimadda Belgian.
Waa kuwan shan waxyaabood oo lagu ogaanayo ninkii lagu eedeeyay in uu kaalin muhiim ah ka ciyaaray kooxda Islaamiga ah ee kooxda Islaamiga ah ee weerarka ugu weyn ee ka dhaca Yurub.
1. Belgium wuxuu xabsiga ku jiri karaa 40 sano
Saddex sarkaal oo bilayska Belgian ah iyo saaxiib u dhashay Faransiiska ayaa si xun u dhaawacmay markii rag hubeeysan ay dab qabadsiiyeen iyagoo raadinaya guri ku yaal degmada Forestka ee magaalada Brussels 15-kii Maarso 2016, oo lala xiriirinayo weerarradii Paris.
Cabdicali Cabdiraxmaan wuxuu u baxsaday afar bilood ka dib weerarradii Paris
Waqtigaas Cabdisamaal wuxuu ahaa ninka ugu dheer Yurub, laakiin bilaysku ma raadin gaar ahaan maalintaas. Nin hubaysan ayaa toogasho ku toogtay goobta iyo laba nin oo kale, kadibna loo aqoonsaday Salah Abdeslam iyo qaranka Tunisia Sofien Ayari, ayaa baxsaday.
Saddex cisho ka dib ayaa loo daad gureeyay dhismo hoose oo ku yaal degmada Molenbeek ee magaalada Brussels, oo ku dhow guriga qoyska ee Abdesam. Markii ay booliisku soo ruqaansadeen, Abdesalam ayaa la toogtay oo dhaawacmay, halka ninka kale lagu qabqabtay.
Iyadoo la socota Sofien Ayari, Abdeslam ayaa lagu eedeynayaa in uu ku dhaawacmay askarta bilayska, isagoo ku eedeeyay isku dayga dilka “argagixisada” iyo haysashada hubka sharci-darrada ah.
“Ficiladani, waxaa laga yaabaa inuu helo xukun ilaa 40 sano oo xabsi ah,” ayuu yiri Luc Hennart, oo madaxweyne ka ah maxkamadda Faransiiska ee ugu horreeysay ee ku taal Brussels, isagoo u sheegay Reuters Television.
Sofien Ayari, ayaa sheegtay in warbaahinta Belgium-ka ay u dagaallantay IS IS ee Suuriya, ayaa la sheegay in ay gashay Yurub iyadoo loo marayo Greece bishii Sebteembar 2015, taasoo muujinaysa qaxooti Suuriya, iyaga oo isticmaalaya magaca been abuurka ah Monir Ahmed Alaaj iyo Amine Choukri.
Kor u kaca iyo dhacdooyinka ‘Islamic State’
Kumanaan shisheeye oo ajnabi ah ayaa soo noqda
2. Cabdiraxmaan wuxuu ku xiran yahay weerarada Brussels
Afar maalmood ka dib markii la qabtay, saddex qof oo ismiidaamin ah ayaa ku dhintay 32 qof waxayna ku dhaawacmeen 340 garoonka diyaaradaha ee Brussels iyo xarun metro.
Xeer-ilaaliyeyaasha Belgian waxay aaminsan yihiin in Cabdalla uu la xidhiidhay kuwii wax qarxiyay laakiin wax dacwad ah lama soo gudbin.
Waxa la soo jeediyay inuu qayb ka ahaa xarun IS-ta ah oo diyaarinaysa weeraro loo gaystay Easter, laakiin markii la qabtay ayaa la keenay. Iskaashatada jihaadiyiinta ayaa laga yaabaa in ay ka walwalsan yihiin in daboolkooda la duubay.
Qareenkiisa difaaca ayaa mar dambe sheegay in macmiilkiisa uu diidey aqoonta weerarrada.
Burburkii Brussels: Waxa aan ognahay
Xiriiriyeyaasha baayacmushtarka Paris iyo Brussels ayaa cambaareeyay
3. Waa inuu ku dhintay Paris …
… sida laga soo xigtay wargayska Faransiiska, oo ku salaysan qirasho uu ku sameeyay bilayska ka dib markii la soo xiray, halkaasoo uu ku sheegay in saddexda baabuur ee kale ee baabuurta la waday.
Waxa uu soo qaaday bomka ismiidaamiska ah laakiin wuxuu ku fashilmay in uu baxo oo uu ku tuuro hal bam.
Sawir gacmeedka Reuters
Madaxweynihii Faransiiska Emmanuel Macron (oo midig) ayaa ku kulmay qoysaska dhibbanayaasha sannad-guuradii labaad ee weerarrada
Kadib markii uu udheeray baarayaasha waxa uu qorsheynayay in uu isku tuuro meel ka baxsan Stade de France, ayuu la sheegay in uu markii dambe sheegay in uu bedelay maskaxdiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Raadiyaha Faransiiska ayaa ka soo xigtay isaga oo sheegay in fariin laga helay kombiyuutar la tuuray oo ku yaala magaalada Bruxelles oo ah xeelad is-miidaamin ahaa, dhab ahaan, khaladka (Faransiiska).
“Waxaan runtii jeclaan lahaa in uu ka mid yahay shahiidooyinka [sagaalka kale ee la tuhunsan yahay weeraryahanno, kuwaas oo dhammaantood dhintay], laakiin Ilaahay ayaa go’aansaday in si khalad ah loo soo galo suunka” ayuu yiri.
Inkastoo 130 qof ay ku dhinteen magaalada Paris, ugu yaraan 353 qof ayaa ku dhaawacmey weerarka IS-ga oo dadka ku qarxiyay si aan kala sooc lahayn, oo lagu beegsanayo hoolka xafladaha, baararka iyo garoonkaba.
Cabdiraxmaan wuxuu weli sugayaa maxkamad isaga oo ku eedeynaya sheegashadiisa ku lug leh weerarrada. Waxaa lagu baadigoobayaa shaki laga qabo dilka la xiriira argagixisada iyo iskuday dil.
Weerarada Paris: Maxaa dhacay habeenkii ayuu joojiyay hadalka
Calaamad muuqaal ah Fadhiga eedaysanaha ee garsooraha magaalada Brussels
Tan iyo markii uu ku biiray Faransiiska bishii Abriil 2016, Abdeslam, oo ah 28-jir, ayaa su’aalo waydiiyay baadhitaannada maxkamadaynta shan jeer, ugu dambeyntii bartamihii November.
Wuxuu diiday inuu ka jawaabo su’aalaha mar kasta.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP, ayaa lagu soo warramey in ay ka jawaabtay haweeney xabsi ku jirto isaga oo u sheegaya “Waan ka xishoonayaa cidda aan ahay”.
5. Wuxuu xabsiga ka sii cararayaa
Ninka hore ee ugu roonaa Yurub ayaa laga soo wareejiyay xabsigiisa haatan ee koonfurta Paris, Fleury-Mérogis, oo ku dhowaad u dhow xadka Belgian, muddadii uu socday maxkamadiisa.
AFP waa sawir gacmeed
Muuqaal sawireed Waqtiga maxkamadeynta Brussels, Abdeslam wuxuu u safri doonaa Vendin-le-Vieil maalin kasta
Vendin-le-Vieil, oo u dhow magaalada waqooyiga ee Lille iyo qiyaastii 150km (93 miles) oo ka timid Brussels, waa mid ka mid ah xabsiyada ugu sareeya Faransiiska.
Cabdiraxmaan wuxuu lahaan doonaa gabi ahaanba ismaaciil, ayuu ilo wareedyo ka tirsan ururada shaqaalaha u sheegay AFP.
Xabsiga wuxuu sameeyey cinwaannada qaranka 12kii Jannaayo